Madaxweynaha Mexico wuxuu soo jeedinayaa ‘aagga xorta ah’ inuu soo jiito maal-gashiga, yareeyo socdaalka Mareykanka – Walaal24 Newss
Madaxweynaha Mexico wuxuu soo jeedinayaa ‘aagga xorta ah’ inuu soo jiito maal-gashiga, yareeyo socdaalka Mareykanka
Madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa soo jeediyay abuurista dhaqaale “bilaash ah” oo ku yaal xudduudaha Mareykanka iyo Mexico.
Lopez Obrador oo ku dhawaaqay Sabtida, ayaa abuuri doonta aag bilaash ah oo ka furtay Gacanka Mexico oo ku yaala xeebta Pacific iyo in ka badan 15 mayl ballaaran, San Diego Union-Tribune ayaa soo warisay.
Aagga dakhliga, canshuurta dakhliga waxaa hoos loo dhigi doonaa canshuurta saddexaad iyo Value Added Added on badeecadaha la dhimi lahaa kala badh, mushaharka ugu yar ee kor u kici lahaa boqolkiiba 100, iyo qiimaha shidaalku waxay u dhigmi doonaan qiimaha Maraykanka, warbixinta ayaa sheegay.
“Waxay noqon doontaa aagga ugu weyn caalamka ee adduunka,” ayuu yiri Lopez Obrador. “Waa arrin aad muhiim u ah in la qorsheeyo maalgashiga, guuleysiga shaqooyinka iyo ka faa’iideysashada awoodda dhaqaale ee Mareykanka.”
Lopez Obrador, oo ah nin u shaqeynaya garabka bidix, ayaa qaatay bishii Dec. 1 isagoo ballanqaaday inuu gacan ka geysanayo saboolka waddanka, isagoo xusay in mushaarka ugu yar ee qaranku uu ka lumay 70 boqolkiiba awooddiisa wax iibsiga tobannaankii sano ee la soo dhaafay ka dib markii uu burburay iyo dhibaatooyin dhaqaale.
Bixiyeyaasha qorshaha “free zone” ee madaxweynaha ayaa aaminsan in ay yareyn doonto dhiirigelinta dadka reer Mexico si ay u haajiraan Mareykanka una kordhiyaan tartanka ganacsiyada maxaliga ah.
Laakiin qaar kale waxay ka baqayaan shirkadaha Mexican, inay soo jiidaan canshuur hooseeya, laga yaabo inay u guuraan aagga xorta ah isla markaana abuuraan guud ahaan khasaarada canshuurta ee dalka oo dhan.
“Haddii shirkado badani ay u guuraan xadka, markaa xukuumadda Mexico waxay luminaysaa nasiib,” ayuu yiri Duncan Wood, oo ah agaasimaha Machadka Mexico ee Washington, Xarunta Wilson Center ee Xarunta.
Najla Wehbe Dipp, oo ah hoggaamiyihii hore ee Tijuana ayaa lagu soo warramey warbixinta, isaga oo sheegay in labanlaabanta mushaharka ugu yar uu yahay seef laba jibbaaran.
Kor u qaadista mushaharka ugu yar wuxuu ka caawiyaa shaqaalaha “qaybaha sida beeraha sababta oo ah halkaa waa halka ugu yar ee dadka lagu siiyo”, laakiin dhinaca kale, “macnaheedu waa in milkiilayaasha ganacsigu awoodi kari waayaan inay shaqeeyaan (shaqaaleeyaan) shaqaale badan,” Wehbe Dipp ayuu yidhi.
Weli, saameynta qorshaha cusub ee Lopez Obrador lama hubin doono illaa sanad kale.
“Waxaan u maleynayaa inay socoto waqti dheer si ay u aragto saameyn dhaqaale dhab ah,” ayuu yiri Wehbe Dipp.
Akoonada Dowladda Hoose ee Muqdihso oo la hakiyay in lacag lagala baxo
Guddoomiyaha cusub ee Maxkamada sare oo maanta xilka si rasmi ah ula wareegay
War deg deg: Madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo is casilay
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya oo kala hadlay Sheekhul Azhar arrimaha waxbarashada iyo la dagaalanka xagjirka
Dowlada Kenya oo ka mamnuucday garoomadeeda alaabaha laga keeno Soomaaliya
Ra’iisul wasaaraha dalka Pakistan oo sheegay in duuliyaha xorriyaddiisa dib loo siin doono
Baarlamaanka Australia oo kalsoonida kala noqday Xildhibaan taageeray weerarkii masaajidka New Zealand
Daawo: Ra’iisal wasare ku xigenka XFS “Gudomiye Siyaasiinta xanaaqsan aad u soo jeedinlaheyd iney iyaguna arkaan indhahoodana ku arkaan”
Daawo: Dowladda Soomalia iyo Turkiga oo kala saxiixday mashruuca heshiska dibu dhiska biyo xireenka Sabuuni iyo keydka biyaha Xawaadley ee wabiga Shabeelle
Daawo: Madaxweyne Farmajo “waa haben isugu nimid Casho an ugu talagalnay Walaalken Jawaari wixii horey u dhacay is cafino”